Mayelana NATHI - Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
Kungani ukhetha iCDADA?
Iqembu, eliqukethe amafemu amathathu, liphethe indawo yokukhiqiza engama-52,400m² futhi liqashe abasebenzi abangaphezu kwama-500.
Sisebenzisa i-workshop yokushaya isibhakela, i-workshop yokubumba umjovo, i-workshop ye-hydraulic, indawo yokushisela indawo kanye ne-riveting workshop, i-workshop yomhlangano, kanye ne-workshop yokuhlola ikhwalithi ehlangabezana nazo zonke izidingo zethu zokuphathwa kwekhwalithi.
Isikhungo sokukhiqiza sinabasebenzi abangama-400 okubandakanya abasebenzi bezobuchwepheshe abangama-32, kanye nabasebenzi abaphezulu abangama-30. Sinezazi eziningi zemboni ezintweni zikagesi ezinamandla kagesi aphansi.
Ngenxa yalesi sakhiwo sokusebenza kahle kakhulu, sesidlule umkhiqizo waminyaka yonke wama-800,000 MCCB kanye nama-5,000,000 amayunithi we-MCB.
Imikhiqizo yethu yesekhethi iklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokufakwa kwabasebenzisi abancane kuze kufike eziteshini ze-transformer zezimboni naseziteshini zokusabalalisa amandla. Uzothola imikhiqizo yethu ifakwa ezigayo zensimbi, ezisekelweni zikawoyela, ezibhedlela, eziteshini zezitimela, ezikhumulweni zezindiza, ezikhungweni zekhompyutha, ezakhiweni zamahhovisi, ezikhungweni zemihlangano, emathiyetha, ezakhiweni zamabhilidi, nakusiphi esinye isakhiwo esinezidingo zikagesi.
UDada uhlala ezinikele ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ama-breaker wesekethe. Sikhulise ngempumelelo ibhizinisi lethu lomhlaba jikelele emazweni angaphezu kwezi-20 kanye nasezifundeni eziseYurophu, eMelika, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika kanye naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia.
Sekuyiminyaka eminingi, sihlanganyele ekubhideleni iphrojekthi yegridi kazwelonke yamaShayina, sakha umkhiqizo wenkampani yethu futhi sandise amakhono ethu nokufinyelela. Siyaqhubeka nokufinyelela lo mgomo ngokunamathela kwifilosofi yenkampani ethi "Cabanga kakhudlwana ngamakhasimende futhi wenze kangcono kumakhasimende". Ekugcineni, sihlose ukukhulisa ukuqonda kokuphathwa kukagesi futhi sizibophezele ekubeni ngumholi osezingeni lomhlaba emikhiqizweni kagesi esezingeni eliphakeme. UDada ubheka ukuguqula uhlelo lukagesi lwaseChina, kepha nolwezwe.
• I-CDADA izinikele ekuhlinzekeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokunikezela ngemikhiqizo evela kubakhiqizi abaphezulu nokunikezela ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala zamakhasimende.
• Sizibophezele ekunikezeni izinkampani zomhlaba wonke imikhiqizo esezingeni esezingeni eliphezulu yokusiza ukuncintisana ezimakethe zanamuhla.
• Ithimba lethu le-R & D ligxile ekwakheni ubuchwepheshe obusha bokuqhekeza izifunda ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ayakwazi ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
• Abasebenzi bethu banesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-30 esihlinzeka ngamakhasimende enziwe umuntu ngamunye.